Soo dejisan WinX DVD Ripper Platinum 8.20.1 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariCD & DVD-ga ripperWinX DVD Ripper Platinum
Bogga rasmiga ah: WinX DVD Ripper Platinum
WinX DVD Ripper Platinum – software ah si loo farsameeyo DVD ku saabsan heerka ku habboon. software wuu awoodaa inuu badalo DVD galay qaabab kala duwan video cayimista soo koobin lagama maarmaanka u ah loo maqli karo on qalabka mobile la xiriira ama qoraalkayga internet-ka iyada oo aan khasaaro tayo leh. WinX DVD Ripper Platinum kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan nuqul DVD ah siyaabo kala duwan: badbaadin mid maqal iyo track video qaab file hal, nuqul ka dhan audio iyo video tracks, in u saamaxaaya in ay mar dambe iyaga dooran in aad ciyaaryahan, DVD Gadzhiyev in ISO image of file a si ay u qoraan disk cusub ama badbaadin wax walba in folder. WinX DVD Ripper Platinum waa inay awoodaan inay garab siyaabaha kala duwan ee ilaalinta nuqul DVD ah, oo ay ku jirto sirta ama xannibaya by Gobolka. Sidoo kale software ku jira editor ka dhisay-in video la set oo ah hawlaha ugu muhiimsan ee si uu u xaliyo qalad caadi ah ee video ah.
Badalidda DVDs galay qaabab kala duwan video
Dhisay-in profiles la fursadaha rakibay for diinta
Goldogob ee ilaalinta naqilkii
Dhisay-in editor video
Soo dejisan WinX DVD Ripper Platinum
Faallo ku saabsan WinX DVD Ripper Platinum
WinX DVD Ripper Platinum Xirfadaha la xiriira